डिप्रेसन के हो ? कसरी बच्ने ? - Samata Khabar
२ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:२०
काठमाडौं : दिनभरमा हामी कुनै न कुनै कुराले चिन्तित हुन्छौं । बढ्दो कार्य व्यवस्था तनाब तथा भविष्यका कुराले, पैसाको कुराले, विफलताको कुराले, साथीभाईको कुराले, शारीरिक रोगको कुराले, छोराछोरीको कुराले, परिवारको कुराले निकै चिन्ति हुने गर्छौ । विश्वभरमै तनावले निकै ठुलो रुप लिएको पाउन सकिन्छ ।
डिप्रेसनका मनोवैज्ञानिक लक्षण :
विषयबाट ध्यान हटाउने :
डिप्रेसनको कारण थाहा पाउने :
भविष्यको चिन्ता नलिने :
गीत सुन्ने :
भावनाहरु सेयर गर्नु :
नशाबाट जोगिने :
हास्ने कला सिक्ने :
एक्लै नबस्ने :
राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस आज मनाइँदै